वजन घटाने को लागी आत्म सम्मोहन
हालै, वजन घटाने को लागि आत्म सम्मोहन धेरै लोकप्रिय छ। यो सर्वोत्तम पोषण र नियमित शारीरिक गतिविधिको लागि अतिरिक्त माध्यमको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। त्यहाँ थुप्रै तरिकाहरू छन्, त्यसैले यदि तपाईं चाहानुहुन्छ, सबैले आफैंलाई थप उपयुक्त विकल्प पाउन सक्दछन्।
सम्मोहन र आत्म-सम्मोहनको प्रविधिलाई मास्टर गर्दै
नियमित अभ्यासको साथ, तपाइँ हानिकारक र उच्च क्यालोरी खानेकुरा खाने इच्छा चाहानुहुन्छ। सम्मोहन खानाको बारेमा विचारबाट विचलित हुन मद्दत गर्दछ। यदि चाहानुहुन्छ भने तपाईंले खाना खाने आवश्यक मात्राको लागि "कार्यक्रम" आफैलाई गर्न सक्नुहुन्छ।
स्व-सम्मोहनमा विसर्जनको प्रविधि कसरी महसुस गर्ने:
आफ्नै लागि सबैभन्दा उपयुक्त ठाउँ पत्ता लगाउनुहोस्। उदाहरणको लागि, कसैलाई सोफेमा सहज सहज लाग्थ्यो, जबकि अरू बालकनीमा बस्न मन पराउँछ। यो महत्त्वपूर्ण छ कि केहि कुरा विचलित छैन, त्यसैले फोन बन्द गर्नुहोस्, टिभी, आदि।
आफ्नो सास फेर्नको लागि, प्रत्येक सास र चोकमा नियन्त्रण गर्न महत्त्वपूर्ण छ। यो सास फेर्न सकेसम्म सम्भव छ।5स्कोरको लागि एक सास लिनुहोस्,7मा घुमाउनुहोस्, र बीचको विरूद्ध 1-2-3 ले अन्तिम हुनुपर्दछ। यदि यस्तो सांसले असुविधा ल्याउँछ भने, यसको लागि यसलाई समायोजन गर्नुहोस्।
त्यस पछि, स्वत: सुझावको वाक्यांशहरू भन्न सुरु गर्नुहोस्, जुन यसको साथ सुरु हुनुपर्छ: "म चाहन्छु" वा "म सक्छु।" धेरै चोटि शब्दहरू दोहोर्याउनुहोस्। धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको के कुराको दृश्य हो । यो महत्त्वपूर्ण छ कि त्यहाँ सूत्रहरु मा "नहीं" कण हो। यो सबैभन्दा परिष्कृत लक्ष्य राख्न सिफारिस गरिन्छ, उदाहरणका लागि, "म 20 किलोले वजन कम गर्न चाहन्छु" वा "म चाहन्छु कि सबै जना मानिसहरूले मलाई प्रशंसा गर्दछन्।"
यो बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ कि आत्म-सम्मोहन संग वजन खोने यति सरल छैन, र तपाईंलाई धेरै दर्जन सत्र दोहोर्याउनु पर्छ। मुख्य कुरा रोक्न र सकारात्मक नतिजामा विश्वास गर्न होइन। यदि सबै कुरा सही भएमा, केहि दिनहरूमा खाना खाने बानीहरूमा परिवर्तनहरू सूचना गर्न सम्भव हुनेछ।
युद्ध युद्ध को भगवान
कसरी हात हाल्नु हुन्छ?
कसरी व्यक्तिको तेस्रो आँखा खोल्न?
शिमरामा - क्यामरास मा सिमसार र केमसा को पहिया देखि बाहिर जान्छ?
हाम्रो समयमा चुम्बन कसरी चिन्न सकिन्छ?
कोजिर्रे को दर्पण
फ्लोरेइट - जादुई गुणहरू
एक योगात्मक जनावर - कसरी तपाईंको कुलम जनावरलाई जन्म मिति र राशि चक्रमा चिन्ह लगाउन सकिन्छ?
इन्ब्यूब - आबादी को लक्षणहरू र कसरी इन्सुब आफैबाट हटाउन सकिन्छ?
सानो घरको लागि
राष्ट्रीय उद्यान Tivedens
स्ट्रोक लोक उपचारको उपचार
महिलाको गर्मीको प्यान्ट 2014
कसरी टी-शर्टहरू सही तरिकाले गुणा गर्नुहुन्छ?
वालपेपर शैलीमा अंग्रेजी शैली
स्की रिसोर्ट Palandoken
योनिको वरिपरि खराबी खराबी छ
भविष्य नजिक छ: 21 अद्वितीय यन्त्रहरू जुन आज प्रयोग गर्न सकिन्छ
सबैभन्दा रोमांटिक हास्य
बच्चाको लागि बेबी फाँसिङ